Dzorerazve Kuzvimiririra Kwako NeShawa Sachigaro | KarmanHealthcare.com
Macheya ekugezesa anga aripo chero nguva yekugezera uye mukurumbira wavo uri kuwedzera sezvo huwandu hwevanhu vachembera hunowedzerawo. Matambudziko ekufamba, mamiriro ezvehutano uye kurasikirwa kwekuenzanisa kwakaitwa shawa zvigaro chinodiwa mudzimba dzinoverengeka. Dzimba dzekugezera dzanhasi dziri kukura uye mazhinji acho anogona kugadzirisa nyore nyore a chair yekugeza mumatanga emvura.
Midziyo yakaita sepurasitiki, huni nesimbi zvinoshandiswa mukugadzira zvigaro zvekugezesa. Mazhinji acho akasimba uye akareruka. Mimwe mienzaniso inogona kutopetwa uye kuchengeterwa kushandiswa kwekupedzisira.
Paunenge uchipeta iyo chair yekugeza, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti yakavhurwa kune chaiyo chinzvimbo chekuchengetedza zvinangwa. Kana dzirikuchengetwa unofanirwa kuona kuti dzakapetwa zvakanaka kudzivirira kukuvara. Mimwe macheya ekugezera akakosheswa uye anongova chigaro chihombe chisina musana.
Mimwe mienzaniso ine misana uye ivo vanotora imwe yakati wandei nzvimbo. Iwe uchafanirwa kuchengeta zvaunoda mupfungwa usati waita yako yekupedzisira chair yekugeza chinangwa. Tsvaga dzakasimba, dzinogadziriswa uye dzinokupa rutsigiro rwaunoda.
Kana iwe ukawana chisina kuiswa chigaro chisina kugadzikana, ungangoda kufunga nezve chigaro cheshawa chakashongedzwa. Makushoni akagadzirwa kubva kumusoro-unhu gobvu vinyl uye inodzivirira mvura. Mazhinji magaro ekugezera ane makumbo asina kutsvedza.
Mimwe mienzaniso ye shawa zvigaro vane mavhiri ekukiya mumakumbo. Izvi zvakanakira munhu ane matambudziko ekufamba. Iwo akareruka, akasimba uye ari nyore kufambisa pamusoro pemuromo wegedhi remvura uye kamwe mukati mekugeza.
Mimwe macheya ekugezera ane mavhiri akasungirirwa kunze kwemakumbo, asi mazhinji ane mavhiri anogona kuvharirwa munzvimbo kana ari mushower. Dzimwe mhando dzine mavhiri anotsvedza mumacheya makumbo kana huremu hwaiswa pachigaro.
Wiricheya shawa zvigaro inobatsira zvakanyanya nekuda kwekugona kwavo kupinda nekubuda mushower. Paunogara pane iyo chair yekugeza, isina-kutedzemesa inovhara mavhiri, ichipa yakachengeteka isina-kutsvedza chigaro uchinge uine shawa. Nemuenzaniso uyu, iwe unowana zvakanakisa zvepasirese nyika.
Mitengo ye chair yekugeza inotangira pamadhora makumi mashanu kusvika pamazana mazana emadhora. Ehezve iwo maficha aunoda iwo anodhura ivo vanova. Mamwe mawiricheya anogonawo kushanda mushawa; nokudaro, haufanire kutenga imwe chair yekugeza or wiricheya.